MB 2016 martsa - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2016 Martsa
Matetika aho rehefa mivezivezy dia asaina manao lahateny amin'ny fotoam-piangonana fiangonana, kaonferansa ary fivorian'ny birao i Grace Communion International. Indraindray aho dia angatahina hanome ilay tso-drano farany. Matetika aho dia miverina amin'ny tsodranon'i Aaron, izay natolony ho an'ny Zanak'israely (tamin'ny taona taorian'ny nandosiran'izy ireo avy tany Egypta sy ela talohan'ny nidirany tao amin'ny Tany Nampanantenaina) tany an'efitra. Tamin'izany fotoana izany dia nampianatra ny Isiraely hitandrina ny lalàna Andriamanitra. Ny olona tsy nilamina ary tsy dia mandefitra (raha ny marina, dia andevo tamin'ny androm-piainany rehetra!). Mety nieritreritra izy ireo hoe: “Andriamanitra nitondra antsika nivoaka avy tany Egypta namaky ny Ranomasina Mena ary nanome antsika ny lalàny. Fa eo isika izao ary mbola mirenireny any an'efitra. Inona ny manaraka? " Saingy tsy namaly Andriamanitra tamin'ny nanambarany tamin'ny antsipiriany ny drafitra momba azy ireo. Fa kosa namporisika azy ireo izy hitodika any aminy amin'ny finoana:
Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: Mitenena amin'i Arona sy ny zanany hoe: Izao no holazainareo amin'ny Zanak'Isiraely, raha mitso-drano azy ianareo: Hitahy anareo anie Jehovah ka hiaro anareo; Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao; hanandratra ny tavany aminao ny Tompo ka hanome anao fiadanana (4. Mosesy 6,22).
Hitako i Aaron mijoro eo alohan'ireo zanak'Andriamanitra malalany izay mamelatra ny tanany ary manao io fitahiana io. Voninahitra lehibe tokoa ho azy ny nanome azy ireo ny fitahian'ny Tompo. Araka ny azoko antoka fa fantatrao, i Aaron no mpisoronabe voalohany tamin'ny foko Levita:
Fa Arona kosa dia natokana hanamasina izay masina indrindra, dia izy sy ny zanany mandrakizay, mba hamono zavatra hatao fanatitra eo anatrehan’i Jehovah sy hanompoana sy hitso-drano azy amin’ny anaran’i Jehovah mandrakizay (1 Tant. 2).3,13).
Ny fanomezana tsodrano dia hetsika fiderana am-panajana indrindra, izay nanolorana azy ho an'ny olony Andriamanitra ho famporisihana - eto nandritra ny fifindra-monina sarotra avy tany Egypta nankany amin'ny Tany Nampanantenaina. Ity tsodranon'ny fisoronana ity dia nanondro ny anaran'Andriamanitra sy ny tsodrano mba hiaina ny olony amin'ny fiantohana ny fahasoavana sy ny fitahian'ny Tompo.
Na dia nomena sy natokana ho an'ny olona reraka sy kivy ity fitsodranoana ity tamin'ny diany namaky ny tany efitra, dia azoko atao ihany koa ny mahita ny firesany amintsika androany. Indraindray, rehefa mahatsapa ho toy ny mivezivezy tampoka isika, dia mijery ny ho avy koa. Avy eo dia mila teny fampaherezana isika izay mampatsiahy antsika fa nitahy antsika Andriamanitra ary manohy mamelatra ny tànany miaro antsika. Tokony hampahatsiahy ny tenantsika isika fa mampamirapiratra amintsika ny tavany Izy, manome antsika fahasoavana ary manome antsika ny fiadanany. Ambonin'ny zavatra rehetra, tsy tokony hohadinointsika fa noho ny fitiavana no nanirahany antsika Jesosy Kristy Zanany - Mpisoronabe lehibe sy farany izay manatanteraka ny tsodranon'i Aharôna.
Ny Herinandro Masina (antsoina koa hoe Herinandron’ny Fahoriam-po) dia manomboka herinandro eo ho eo amin’ny Alahadin’ny palmie (mampahatsiahy ny fidiran’i Jesosy tamim-pandresena tao Jerosalema), arahin’ny Alakamisy Masina (ho fahatsiarovana ny Sakafo farany), ny Zoma Masina (ny andro fahatsiarovana izay mampiseho amintsika ny andron’Andriamanitra. hatsaram-panahy amintsika izay naseho tamin’ny fanatitra lehibe indrindra amin’ny fanatitra rehetra) sy ny Sabotsy Masina (fahatsiarovana ny fandevenana an’i Jesosy). Avy eo dia tonga ny andro fahavalo, izay mamirapiratra amin'ny zavatra rehetra - Alahady Paska, izay ankalazantsika ny fitsanganan'i Jesosy, Mpisoronabentsika lehibe, Zanak'Andriamanitra (Heb. 4,14). Mampahatsiahy antsika amin’izao vanim-potoanan’ny taona izao fa voatahy mandrakizay isika “amin’ny fitahiana ara-panahy rehetra any an-danitra amin’ny alalan’i Kristy” (Efes. 1,3).
Eny, miaina fotoana tsy azo antoka isika rehetra. Saingy afaka miala sasatra mora foana isika amin'ny fahafantarana ny fahasoavan'ny nitahian'Andriamanitra antsika ao amin'i Kristy. Ny anaran'Andriamanitra dia manamboatra ny lalana ho an'izao tontolo izao toy ny ony mihetsika mahery, izay mikoriana avy ao amin'ny loharano mankany amin'ny tany lavitra ny rano. Na dia tsy hitantsika amin'ny fomba feno aza io fanomanana io dia fantatsika am-panajana izay tena nambara tamintsika. Tahin'Andriamanitra tokoa isika. Ny herinandro masina dia mampatsiahy izany.
Raha nahare ny tsodranon'ny fisoronana nataon'i Aharôna ny vahoaka israelita ary tsy isalasalana fa nahatsiaro ho nampaherezina izy ireo, dia vetivety dia hadinon'izy ireo ny fampanantenan'Andriamanitra. Izany dia vokatry ny fetra, na dia ny fahalemen'ny fisoronana olombelona aza. Na ny pretra tsara indrindra sy tsy mivadika amin'ny Isiraely aza mety maty. Fa Andriamanitra dia tonga tamin'ny zavatra tsara kokoa (Mpisoronabe tsara kokoa). Ny taratasy ho an'ny Hebreo dia mampahatsiahy antsika fa i Jesosy izay velona mandrakizay dia Mpisoronabe maharitra ho antsika:
Noho izany dia afaka mamonjy mandrakizay ireo manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany koa izy, satria velona foana izy miaro azy ireo. Mety ho antsika koa ny mpisoronabe toy izany: masina, tsy manan-tsiny ary tsy misy loto, tafasaraka amin'ny mpanota ary avo noho ny lanitra [...] (Heb. 7, 25-26; Baiboly Zurich).
Ilay sarin'i Aharôna namelatra ny tanany teo ambonin'ny Isiraely ho fitahiana dia manondro antsika i Jesoa Kristy Mpisoronabe lehibe kokoa. Ny tsodrano omen'i Jesosy ny olon'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho ny fitahian'i Aaron (malalaka kokoa, mahery kokoa ary an'ny tena manokana izy):
Hataoko ao an-tsainy ny lalàko sy hosoratako ao am-pony, ary ho Andriamaniny Aho, ary izy ho oloko. Ary tsy hisy hampianatra ny mpiray tanindrazana aminy, ary tsy hisy hampianatra ny rahalahiny hanao hoe: Mahalalà an’i Jehovah! Satria ho fantatry ny rehetra aho, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa tiako hotsaraina ny faharatsiany ka tsy hotsarovako intsony ny fahotany (Heb.8,10-12; Baiboly Zurich).
Jesosy, Zanak'Andriamanitra, dia miteny fitahiana amin'ny famelana heloka izay hampihavana antsika amin'Andriamanitra sy hamerina amin'ny laoniny ny fifandraisantsika aminy. Fitahiana iray izay hitondra fiovana ao amintsika izay hahatratra hatrany am-pontsika sy ao an-tsaintsika. Izy no mampiakatra antsika ho amin'ny fahatokiana akaiky indrindra sy ny fiarahana amin'ny Tsitoha. Amin'ny alàlan'ny Zanak'Andriamanitra, rahalahintsika, dia fantatsika fa Raintsika Andriamanitra. Amin'ny alàlan'ny Fanahiny Masina dia tonga zanany malalany isika.
Rehefa mieritreritra ny Herinandro Masina aho dia misy antony iray hafa tonga ao an-tsaiko hoe nahoana io fitahiana io no tena zava-dehibe amintsika. Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy dia nivelatra ny sandriny. Ny fiainany sarobidy, natolotra ho sorona ho antsika, dia fitahiana, fitahiana mandrakizay mitoetra eo amin'izao tontolo izao. Jesosy dia nangataka tamin'ny Ray mba hamela antsika amin'ny fahotantsika rehetra, avy eo dia maty izy mba hahavelona antsika.
Taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty sy taloha kelin'ny niakarany tany dia nanome tso-drano hafa i Jesosy:
Ary Jesosy nitondra azy nivoaka hatrany Betania, dia nanandratra ny tànany ka nitso-drano azy; ary raha nitso-drano azy Izy, dia nisaraka taminy ka niakatra ho any an-danitra. Fa niankohoka teo anatrehany izy ireo ka niverina tany Jerosalema tamin’ny fifaliana lehibe (Lio. 24,50- iray).
Raha ny tena izy, dia hoy i Jesosy tamin'ny mpianany, na taloha na ankehitriny: “Izaho mitahy anao sy mitahiry anao, mampamirapiratra ny tavako aminao aho ary miantra anao aho; Asandratro aminao ny tavako, ka homeko fiadanana ianao. "
Enga anie isika hanohy hiaina eo ambanin'ny fitahian'ny Tompontsika sy Mpamonjy antsika, na inona na inona tsy fahatokisana mety hitranga amintsika.
Miarahaba anao amin'ny fijery mahatoky an'i Jesosy aho,